XOG: Kheyre oo ololeh ka bilaabay Muqdisho, xirtayna Hotelka ugu weyn Muqdisho – AfmoNews
XOG: Kheyre oo ololeh ka bilaabay Muqdisho, xirtayna Hotelka ugu weyn Muqdisho
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay in si rasmi ololihiisa uga bilaabay Muqdisho, iyadoo xaruntiisa Ololaha doorashada ay noqotay Hotelka Paradise oo dhowaan uu kireystay.
Hotelka Paradise ayaa la xusuustaa in sanadkii 2016 ay Xarun Olole u aheyd Ra’iisul Wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke.
Sidoo kale, Mr, Kheyre ayaa sameystay saaxiibo badan oo ka caawiya ololaha doorashada, kuwaas oo kala shaqeynaya dhinacyo badan sida Baraha Bulshada, soo xera gelinta dadweynaha kuwooda ugu saameynta badan iyo ganacsato xagga dhaqaalaha ka taageeri doona.
Ilo xog ogaal ah oo ku dhow Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa inoo sheegay in mas’uulkan uu rajo badan ka leeyahay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan Kursiga ugu sareeya dalka oo musharaxiin badan u ordayaan.
Dadka Siyaasadda falanqeeya ayaa ku waramaya in Xasan Cali Kheyre uusan dhigaal wanaagsan oo dhanka siyaasadda ah sameysan,islamarkaana uu mudadii xafiiska joogay si wanaagsan ula dhaqmay badi siyaasiyiinta miisaanka culus kuleh siyaasadda dalka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka.
Musharax madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa hadda olole siyaasadeed oo aad u xooggan ka wada magaalada Nairobio oo ay ku sugan yihiin badi siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Dowladda.